Ukulahleka kukaMiranda Gaddis
UMiranda wazalwa ngoNovemba 18, 1988, e- Oregon City. Waye eSardner Middle School waza waphupha ukuba ngumzekelo omnye ngosuku. U-Miranda wayengumdlali womdaniso waza wachazwa ngabahlobo njengabaphumayo, abahlekisayo nabathanda kakhulu.
Ngomnyaka ka-1995, uyise ka-Miranda wendalo wayefunyanwa enetyala lokuxhaphazwa kwaye wathunyelwa entolongweni. Iqabane lomama kamva laxhaphaza uMilanda waza wagwetywa waza wathunyelwa entolongweni. Wachitha ixesha elifutshane kwikhaya lokukhusela ngenxa yokusetyenziswa kakubi.
Naphezu kweengxaki zakhe, uMiranda wayebonakala enokulinganisela kwaye wayenandipha intsapho yakhe, eyayiquka udadewabo omdala uMaryssa, udade omncinci uMiriya kunye nomntakwabo omncinane uJason.
Akumangalisi ukuba uAshley Hope noMiranda Gaddis babehlobo. Baye kwiqela elinye lomdaniso esikolweni, bahlala kwisakhiwo esinye sendawo, kwaye bafana nokufana. Baye babelana ngamadlelo afanayo okuxhatshazwa ngokwesondo njengabantwana abancinci.
Izakhiwo zezindlu ezazisenziwa nguAshley noMiranda zakhiwa ngasekupheleni kwee-1990. Yanikezela ngezindlu ezinokuhlawulekayo zoomama abangabodwa kunye neentsapho zokusebenza ezingaphantsi, kunye nabagula ngengqondo. Kwakunezinga eliphezulu lokuhlala kwaye lazaliswa ngabantwana. Imindeni yayiza kuhamba, kwaye abantwana bafunde ukufumana abahlobo ngokukhawuleza nabahlali abatsha abafudukela kuyo. Kwakukufutshane nomda we-complex, apho uWard Weaver kunye nosapho lwakhe, banquma ukurenta ikhaya.
Abacebisi babenentombi encinane kufuphi no-Ashley no-Miranda ubudala, kwaye kungekudala ngaphambi kokuba abathathu babe ngabahlobo.
U-Ashley noMiranda bachithe ixesha kwikhaya lomhlobo wabo omtsha, ngamanye amaxesha bahlala ubusuku bombhozo. UMiranda, ngokungafani no-Ashley, akazange ahlale endlwini ye-Weaver ixesha elide. Wayenomdla omnye kunye nabahlobo bamgcina bexakekile kwiminye imisebenzi.
NgoJan 9, 2002, u-Ashley wanyamalala endleleni eya esikolweni.
Amapolisa axubusha uMiranda nabanye abahlobo baka-Ashley. Njengoko ulwazi lucacisiwe, abaphathi baqala ukukrokra ukuba iWard Weaver ibandakanyeke ekushabalaleni kwakhe, kodwa akukho nto yabanjwa. U-Miranda wayebandakanyeka kakhulu kuphando lomngane wakhe, enika amapolisa ngolwazi lwakhe olwenziwe ngu-Ashley naye.
UMiranda wayesazi ingxaki eyabuhlungu u-Ashley ngexesha lokuhlala kwakhe ekhaya laseWeaver. U-Ashley wathemba kuye ukuba iWadi Weaver yayinobudlova kwaye yamdlwengula ngelixa ekhefu eCalifornia. UMiranda, owayengenamahloni ngeengcamango zakhe, waxwayisa abahlobo ukuba bahlale kude nekhaya likaTaaver ngenxa yokuba wayeziva ukuba iWard Weaver yayingozi. Abanye bathi u-Weaver wachaza uMiranda ukuba intombi yakhe ichithwe esikolweni, nakwiindawo abahlala kuyo.
Kwaphela iinyanga ezimbini, kwaye u-Ashley Pond wayesekhoyo. Ubomi bukaMiranda buqala ukubuyela kwindawo evamile. Ngomhla ka-8 kuMatshi 2002, usuku luqale njengeninzi leentsuku zesikolo kwindlu kaMiranda. Unina, uMichelle, washiya malunga no-7: 30 ekuseni, ukuze asebenze. Kucingelwa ukuba uMiranda washiya ukuya kwindawo yakhe yokuhamba ngebhasi ngexesha lakhe eliqhelekileyo, malunga ne-8 ubudala. Wahamba ngendlela efanayo no-Ashley eyenziwa ngosuku awayephela ngalo - ngokukufutshane nomnyango wendlu kaWill Weaver.
Ngeli-1: 20 emini, uMichelle Gaddis wathabatha inxeba evela kwintombi yakhe endala, emxelela ukuba uMiranda wayengasesikolweni kwaye akukho nabanye abahlobo bakhe ababembonile yonke imini. Isikolo samqinisekisa ukwesaba kwakhe, ingxelo yokuba wayengekho kuzo zonke iiklasi. UMichelle waya kwangoko kwipolisa ukuba abike ukuba intombi yakhe yayingekhoyo. Ngoku ihlaselwa yiminyango emibili, amapolisa kunye ne-FBI bahamba uphando malunga ne-clock-clock ngethemba lokufumana uMiranda Gaddis.
Abahlali base-Oregon City babesaba ukuba umntwana othumbileyo wayexakeke ekunqumeni ukuba ngubani na oza kubakho ixhoba. Unina wamantombazana olahlekileyo wayeqinisekile ukuba umntu onoxanduva, wayazi ababini abantombazana. Amapolisa agxininise kule ngcamango kwaye abuyele embuzweni abaninzi abantu abafanayo baxoxwa nabo ngeenyanga ezimbini ngaphambi kokuba u-Ashley adle.
Olunye ulwazi olufumene, lathintele kwiWard Weaver, njengoko kunjalo neAshley Pond, kodwa kunjalo, akukho nto ibanjelwe.
Ukukhala ngokudlwengula kwintombi yonyana kaWard Weaver kwagqitywa ekuphenyweni kwamapolisa ku-Ashley Pond no-Miranda Gaddis. Le ntokazi, isiqingatha, ibalekile kwikhaya laseWeaver, ikhala ngokuba iWard Weaver izame ukudlwengula. Unyana wezintambo walandelwa ngamakholi kumapolisa, esithi uyise wavuma ukuba wabulala uAshley Pond. Ezi zityholo zivumele ukuba amapolisa afune ipropati yeWard Weaver.
Ngempelasonto ka-Agasti 24-25, imizimba ka-Ashley Pond no-Miranda Gaddis yafunyanwa kwipropati yendlu yokuqeshisa iWard Weavers. Umzimba ka-Ashley wafunyanwa ngaphakathi kwimixobo, emgodini, phantsi kwe-slab ye-khonkrithi eyayisithululiwe kungekudala emva kokubikwa kwakhe. Izithambo zikaMiranda zafunyanwa kwikhefu kwipropati enye. I-autopsy yaqinisekisa ubungqina bobabini intombazana.
IWard Weaver iboshwe
Ngo-Oktobha 4, 2002, iWadi Weaver yachitshilwa ngokubulawa kuka-Ashley Pond, 12, noMiranda Gaddis, 13, kunye namanye amanqaku kwiimeko ezingabandakanyekanga, ezibandakanya ukusetyenziswa kakubi ngokwesondo, ukuzama ukudlwengula, ukubulala nokuxhaphaza isidumbu. , yonke into ayithethileyo.
NgoSeptemba 22, 2004, iWard Weaver inetyala lokubulala ezimbini zeentombi zeentombi zakhe zifihla imizimba yazo kwipropati yakhe. Wafumana izivakalisi ezimbini zobomi ngenxa yokufa kuka-Ashley Pond no-Miranda Gaddis.
IWadi Weaver lll: Ubomi bobuGwenxa
Iprofayile ye-Ashley Pond
Iincwadi zokuFunda zabafundi abathandayo
UkuSetyenziswa kunye nokuPhepha